Momba anay - Shijiazhuang Hantex International Co., Ltd.
Manokana amin'ny fanondranana fitafiana, vokatra ao an-tokantrano, entana fampiroboroboana isan-karazany amin'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao izahay.
Hantex International Co. Ltd. dia miorina ao amin'ny renivohitry ny faritanin'i Hebei, ivon'ny famokarana lamba sy akanjo any Chine. Amin'ny làlambe, 3 ora avaratra mankany amin'ny seranam-piaramanidin'i Beijing, ary 6 ora avaratra atsinanana mankany amin'ny seranan'i Tianjin, ary 8 ora atsinanana mankany amin'ny Seaport Qingdao.
Miaraka amin'ny traikefa nandritra ny 15 taona tamin'ny varotra ivelany, dia manampahaizana manokana amin'ny fanondranana ireo fitafiana, vokatra ao an-tokantrano, entana fampiroboroboana isan-karazany amin'ny mpanjifa erak'izao tontolo izao. Izahay koa dia novokarina tamim-pahombiazana ireo vokatra mekanika sy elektronika nanomboka tamin'ny taona 2008. ny tena foto-tsainay dia ny lamba lamba, fanamiana, amin'ny ankapobeny, palitao, akanjo, pataloha sy pataloha fohy, akanjo lava, fanariana na fametahana ary faritra misy ny milina , Solar windmill ， Fanomezana amin'ny masoandro, sns. Ny varotra isan-taona dia manodidina ny $ 8 tapitrisa.
Amin'ny maha-orinasa mpanondrana entana any ivelany antsika, mampiditra vertika teknolojia, indostria ary varotra izahay. Amin'izao fotoana izao dia manana orinasa telo izahay, ny iray ho an'ny fitafiana, ny iray ho an'ny fitafiana plastika ary ny iray ho an'ny Casting. Ary koa mitazona orinasa maherin'ny 50 mandray anjara amin'ny akora, kojakoja ary indostrialy ho mpiara-miasa tsara manodidina an'i Shina.
Fanodinana trano ho an'ny kalitao
Misy 3 QC ao amin'ny departemantan'ny varotra misy anay ary 2 QC isaky ny orinasa misy anay. Io dia ahafahantsika mifehy tsara ny kalitao ary miantoka ny fandefasana ara-potoana.
Mampanantena izahay fa hanome anao
Ny fanambaràn'ny orinasa
3) Akanjo fiasana, toy ny Akanjo, Cape sy Apron, Palitao sy Parka, pataloha, Shorts ary amin'ny ankapobeny, ary koa
karazana fitafiana misaintsaina, izay misy mari-pahaizana CE, EN470-1, EN533, EN531,
BS5852, NFPA2112 ary ASTM D6413.
1) Serivisy tsara kokoa, kalitao avo kokoa ary vidiny mifaninana bebe kokoa
2) Valio avy hatrany, santionany ao anatin'ny 7 andro, Fandefasana ara-potoana.
3) fanekena kely ekena.
Mamorona lanja ny serivisy, mahatratra marika ny matihanina
Niorina tamin'ny taona 2008, Hantex dia miorina ao amin'ny tanànan'i Shijiazhuang any amin'ny faritanin'i Hebei, izay ivon-toeran'ny indostrian'ny lamba sy akanjo any Sina. Ora iray mankany amin'ny tanànan'i Beijing ny lalamby haingam-pandeha. Amin'ny kamio, dia adiny efatra mankany Seranan'i Tianjin ary adiny enina mankany amin'ny Seranana Qingdao amin'ny làlambe.
Miaraka amin'ny traikefa niainan'ny 20taona teo amin'ny varotra iraisam-pirenena, manampahaizana manokana amin'ny fanondranana akanjo marevaka amin'ny akorandriaka, akanjo mitafy akanjo, akanjo lava, lamaody lamaody, lamba lamba ary vokatra ao an-tokatrano any Eropa, USA ary Amerika atsimo, afrika atsimo atsinanana ary atsinanana afovoany izahay. Sns
Amin'ny maha-iray amin'ireo orinasa manondrana any ivelany, mitazona orinasa maherin'ny 100 izahay ho mpiara-miombon'antoka tsara manerana an'i Shina, izay mirotsaka amin'ny lamba, lamba plastika, akanjo, fitaovana sns.
Doka amin'ny magazine
Aseho ao amin'ny Canton Fair
Azafady zahao ny efitrano fampirantiana hitadiavana izay tadiavinao, dia mandefasa mailaka anay anio. Ny fangatahana ataonao dia hankasitrahana tanteraka ary ekena ny baiko OEM / ODM.
Fax. + 86-311-87823360